Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe kabusha BIOS: emuva ukuzinza
Ngezinye izikhathi imfundamakhwela msebenzisi akanayo ukuqaphela indlela esibonakala sina imiphumela ingase ibe phezu izinguquko okungalungile ukuze umsebenzi Basic wokufaka / lokukhipha System. Nokho, akubona bonke abasebenzisi, bakwazi ukungena "engcwelengcwele" kohlelo computer, yaziwa kanjani kabusha izilungiselelo BIOS. Kodwa ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi umsebenzisi kubalulekile ukubuyisela Computing elahlekile ngasizathu simbe noma ezinye "Amapharamitha ukuzinza." Ngakho ake sibheke zonke izindlela ezisetshenziswa kakhulu kabusha izilungiselelo BIOS ukuze isimo sazo sokuqala eyaziwa futhi.
umsebenzisi Novice kubaluleke kakhulu ukwazi indlela kabusha BIOS!
Futhi kuyiqiniso! izimo Esingalindelekile lapho kungase kudingeke ukuba lezo zinqubo Uhlelo-technical, njengoba besho, inqola kanye weloli elithile elincane. Inkinga esivame kakhulu - ukungakwazi ukuba ivuleke uhlelo lokusebenza - ngokuvamile umphumela izinguquko engasilo umsebenzi BIOS firmware. Kukhona amacala lapho isizathu esiholele ikhompyutha yesikhashana yokuswela iba iconsi banal okuphakela amandla e inethiwekhi eyodwa. Masingapheli isikhathi, futhi njengoba ezingezinhle njengoba zikagesi. Ngokuvamile, ukwazi indlela kabusha izilungiselelo BIOS, kubalulekile futhi kuyadingeka!
A amazwi ambalwa mayelana ezizimele "kwencika"
Mhlawumbe wena kuyoba uhlobo sambulo, kodwa umbadlana ifakwe ibhethri ekhethekile, amandla okusiza ukugcina idatha mayelana kokuqala ikhompyutha usesikhathini. Echaza kabanzi ngenhla, ungakwazi ukwengeza: indima elandelayo izinguquko BIOS alotshwe memory chip ekhethekile - CMOS.
Uma ibhethri ngenhla zingaphumeleli (ukusebenzisa amandla ongaphakeme), khona-ke kungenzeka ukuthi uhlelo lwe-computer uqala boit. By the way, ngokuvamile kuyasiza ukuphulukisa izimbungulu isinyathelo silula: ukuyikhipha ibhethri kusukela isokhethi umbadlana nokuhlelwa kabusha ngilimise usendaweni yawo imizuzwana eyishumi.
Yini okudingeka uyenze ukuze usethe kabusha BIOS kumasethingi factory
Okokuqala, ungazama ukuxazulula izinkinga ngenhla firmware esakhelwe uqobo. Okungukuthi, udinga ukufaka i-BIOS-system bese wenza kusebenze inqubo yokutakula ngesandla. Kufanele kuqashelwe ukuthi kuye ukuguqulwa umshini electronic, izici zayo kanye nobuchwepheshe linamathele ke, ogibele base unit firmware zingabi zazo siqu software uhlelo.
Ngakho-ke, i-BIOS Logon iskripthi kumakhompyutha ezivela abakhiqizi ezahlukene akuvunyelwe ezilungisiwe ngokucindezela inkinobho ohambelana. It is ikakhulukazi esetshenziswa emsebenzini ukhiye «Susa» noma «F2». Kunoma yikuphi, lapho ikhompyutha iqale esikrinini PC ubonisa ulwazi test lapho ukhiye unesibopho okufakwayo BIOS.
Ngakho, thina uqhubekele isikhathi ngokushesha ukukhokhela lo mbuzo: "Ngingakwazi kanjani kabusha izilungiselelo BIOS":
Uma endaweni firmware yokusebenzela, zama ucindezele «F9». Ezimweni eziningi, ukubandakanywa le nkinobho Kuvuselela kabusha endaweni othomathikhi izilungiselelo ezizenzakalelayo.
Uma "ukhiye ashisayo" ayisebenzi, kufanele bahlolisise BIOS-interface khona ilebula ngesimo «Layisha okuzenzakalelayo ...» noma into efana naleyo. Ngezinye izikhathi, le ndlela kufihliwe kwelinye tigaba firmware.
Kwezinye izimo, setha kabusha kube okumisiwe izilungiselelo BIOS kabusha usebenzisa ekhethekile CMOS-jumper.
Ngaphambi kokuqhubeka ukuqaliswa umcimbi, yivale i-computer futhi uyikhiphe. Uma une ngemibhalo yomsebenzi, kufanele uzifunde ngokucophelela.
Vala ikhava uhlelo iyunithi.
Thola "omazisayo" ibhethri umbadlana.
Ngokuvamile, CMOS-jumper eduze ngokushesha ibhethri.
Yisa plastic "eduze" kuya imizuzwana 1-15 kusukela isikhundla 1-2 kwindawo 2-3.
Faka into asizayo indawo yayo yasekuqaleni avale umnyango iKhabhinethi.
Izixazululo electronics aphathekayo
I embodiments ezichazwe ngenhla futhi ezingase zithathwe ngempumelelo e-laptop uma udinga ukusetha kabusha izilungiselelo BIOS kwi laptop. Nokho, lapho "izimo ephathekayo," enjalo kungase kube khona ukungqubuzana. Ikakhulukazi, ukufinyelela CMOS-ibattery laptops iningi umane ivaliwe.
Uma sikubeka kalula, ibhethri Itholakala "ekujuleni" iningi devaysa icwecwe, ngakhoke ngaphandle ukuqaqa izitho zomzimba (ukuze uthole ibhethri) ukuthi ushintshe ibhethri ngelinye kuyoba nzima engenakwenzeka. Ngakho-ke masikhuthalele babe Sokuzivikela kwenye samuntu, ngenhlanhla, ubuye ngempumelelo ngenhlonipho kumakhompyutha umile.
Qalisa Umbuso ekubuyiseleni
Ngemva esibonakalayo ekuqaleni-up (ebhokisini lokusesha) noma ibhokisi lokuhlola inkonzo iwindi "Run" (cindezela inhlanganiselazihlonzi «Win R»), faka umyalo: sokulungisa iphutha.
Okulandelayo ukuvula uhlu console okulandelayo:
Ukuze AMI BIOS: O 70 FF ke "Faka" nokubhala: O 71 FF, futhi uchofoze «Faka» futhi uphetha zonke Q. uhlamvu
Nge AWARD BIOS: 70 Mayelana 17 Mayelana 73 17 nangaphezulu Q.
Ungase singaba usizo kabi lesi siphakamiso. Nokho, kukhona esinye samuntu kuzilungiselelo yokusetha kabusha firmware laptops: 10-15 imizuzwana ukuvala oxhumana ezimbili eziqondile mayelana nale umbadlana. Nokho, akubona bonke ulwazi olufana is ebalulwe ishidi idatha zedivayisi ethile Computing. Ngokwesibonelo, kwezinye izinguqulo laptops amaphuzu amabili ezinjalo zitholakala eduze ngokushesha we-RAM devaysa nemigoqo. Ngokuvamile, ubani ngifuna - ukuthi uyohlale ukuthola!
Awu, wena kufanele uhalalisele, wena Manje usuyazi ukuthi kabusha BIOS nge isethaphu. Nokho, bakhethe lapho ngokukhetha okungekho inketho ukubuyisela izilungiselelo imboni yedivaysi. Ngenxa yokuthi i-Internet - ihlaya olukhohlisayo kakhulu, nabeluleki-prikolistov kumandla khona. osenyameni eyimpumelelo nokuzinza Computing wakho devaysu!
Routers Linksys: incazelo onobuhle ezintathu ethandwa kakhulu
Processor AMD Athlon II X4 635 Socket AM3: Ukubuyekeza, ukubuyekezwa
Indlela ukukhetha isifundi sekhadi
Isizukulwane sesibili lwamakhompyutha - kwathatha transistors
Gamepad futhi induku yokudlala - ungomunye futhi okufanayo?
"Lordestin" lisho ukuthini. Yokusetshenziswa
Indlela ukususa ikhodi yokukhiya of Nokia: esiphuthumayo!
Yokuziphatha Environmental: umqondo, izimiso eziyisisekelo, izinkinga
Isimiso Sokuthungatha kaZwelonke-Akhawunti - kwezomnotho "portrait" isimo
Isitendi amaqanda ama-Easter ngezandla zabo: isigaba master
Amaphuzu "afana neLeps" - umkhuba ka-2017
Ukubuyekezwa kwe "iNsephe-Farmer" imoto
Indawo yokuhlala enhlekayo yaseSt. Petersburg
Ungahlala kanjani ukupheka pasta ne isitshalo seqanda